We She Me: ထောပတ်-ပန်းသီး အချိုပွဲ
သက်ဝေ - 7/31/08, 10:18 PM
ပန်းသီးထက် ထောပတ်သီးကို ပိုကြိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီမှာက ဈေးကြီးတယ်ဝေ့...။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီWeekend မှာ ဒီအချိုပွဲလေးတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်..။
Very Good Idea အတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ..။
Anonymous - 8/1/08, 2:41 AM
ဟုတ်တယ် ထောပတ်သီးကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။ ပန်းသီးနဲ့ နို့ဆီနို့စိမ်းလဲ ကြိုက်တာပဲ။ အဲဒီ သုံးမျိုးရောပြီးတော့ တခါမှ မစားဘူးဘူး။ ထောပတ်သီးဈေးကြည့်ပြီး လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးဗျို့။
Peanut - 8/3/08, 8:11 AM
ထောပတ်သီးကြိုက်တယ်.. ပန်းသီးတော့ ကြိုက်ဘူး :(
Andy Myint - 8/4/08, 9:38 PM
မသက်ဝေ၊ စာဖတ်သူ၊ ပီးနက်တို့ရေ ဟုတ်တယ် ပန်းသီးကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ကြဘူး... ဒါပေမယ့် နှစ်ခု ရောစားကြည့်ရင် ကောင်းတယ် တကယ်ပြောတာ
ရှင်မင်း - 8/24/08, 1:27 AM
ရှင်မင်းကတော့ Pink Lady ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ ဖျော်ရည်အတွက်ဆို
Andy Myint - 8/24/08, 3:09 PM
ဟုတ်တယ် ရှင်မင်း .. မုန်လာဥနီနဲ့ ဖျော်တာ ကြိုက်တယ်။
ThuHninSee - 8/24/08, 5:48 PM
Anonymous - 10/23/08, 1:41 PM
I would like to buy egg mould to boil as so many patterns of yolk.
Could you pls let me know product name.
nyimuyar - 12/26/08, 9:05 PM
အမဲကြော်နည်းများ ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ အမဲသားဟင်း ချက်လိုက်ရပါရောလားဗျို့ ။ နောက်လည်း ဟင်းချက်နည်းများများ တင်နိုင်ပါစေ ကိုအန်ဒီ၊
ချစ်ကြည်အေး - 3/14/10, 11:53 PM
Red Delicious နဲ့ Granny Smith ကို ကြိုက်တယ်၊ Granny Smith က အတုံးလေးတွေ စိတ်ပြီး ထမင်းနဲ့ တို့စရာလုပ်စားဖူးတယ် သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ စားဖူးတာ , ထောပတ်သီး နဲ့ရောပြီး နိူ့စိမ်းဆမ်းထားတာ မစမ်းဖူးသေးဘူး၊ စားကြည့်ပြီးမှ ဗားဒစ် ထပ်လာပေးမယ်... :)